Isu soo dhawaynta Muwaadiniinta Qurba-joogga iyo Qaran-joogga (IMQIQ)/
Somaliland Diaspora Agency
SL Diaspora History
SL Diaspora Contribution
Contact SL Diaspora Committees
Active Projects & Priorities
Somaliland Deaf Youth Education Project
Contact Implementing Committees
Send money to Respective Bank Accounts
Make a land property file
Purchase a land
Get National ID or Passport
Insurances in Somaliland
About SL Diaspora Database
Somaliland Diaspora Observers form - Elections 2017
Somaliland Diaspora Business Investment Survey + Registration
Downlaod Registration Form
Minister - Dr. Saad Ali Shire
Chairman - Abdi Abdilahi Hirsi
WAA BARNAAMISH DAAWASHO AH OO LA MAGAC-BAXAY ISDALON (INTEGRATING SOMALILAND DIASPORA AND LOCAL NATIONALS ) https://youtu.be/LeG3-mgxVkY
ISDALON INTEGRATING SOMALILAND DIASPORA AND LOCAL NATIONALS https://youtu.be/LeG3-mgxVkY
Isu soo dhawaynta Muwaadiniinta Qurba-joogga iyo Qaran-joogga (IMQIQ)/ Wasaarada Arrimaha Dibedda & Iskaashiga Caalamiga ah Hay’adda Qurba-joogga...
Ha'adda Qurba-joogga oo u Kulan la Qaadatay Ganacso Qurba-joogga Hay’dda qurba-joogga Somaliland waxay kulan la qaadatay 28 bishii 1aad ee sanadkan...
Tweets by @sldiasporaagenc
Newsletter - Click to Download
Wasaarada Arrimaha Dibedda & Iskaashiga Caalamiga ah
Hay’adda Qurba-joogga Soomaaliland
Waaxda Cilmi-baadhista iyo Qorsheynta
Barnaamish Maqal iyo Muuqaal ah, iyo waliba Qoraal
Isu soo dhaweynta Muwaadiniinta Qurba-joogga iyo Qaran-joogga ah (IMQIQ)
Integrating Somaliland Diaspora and Local Nationals (ISDALON)
Waa barnaamish ay Hay’adda Qurba-joogu waddo oo ka dhashay waayo aragnimaddii iyo aqoontii mid ka mid ah hawl-wadeenadii waaxda cilmi-baadhista iyo qorsheynta ee Hay’adda Qurba-joogga ay ka heleen daraasaddii ay Hay’addu ka waday doorka qurba-joogga Somaliland ku leeyihiin koboca dhaqaalaha waddanka.
Ka dib markii aan mudo ka shaqeynayey Hay’adda qurba-joogga Somaliland ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga, waxaan helay aqoon iyo waayo-aragnimo aanan waligay ku fikirin, filayna inay jirto aduunka, taas oo ah mid aad iyo aad waxtar ugu leh horumarka dalka. Aqoontaas iyo waaya-aragnimadaas oo aan qayb kamid ah ku soo bandhigi doono barnaamishkan la magac-baxay IMQIQ (Isu soo dhawaynta Muwaadinniinta Qurba-joogga iyo Qaran-joogga) oo afka qalaadna kula magac-baxay ISDALON (Integrating Somaliland Diaspora and Local Nationas), waxaan aad iyo aad u ugu faraxsanahay inaan idin la wadaago, idina aad noo soo gudbisaan wixii talo iyo tusaale ah ee aad ka aragtaan barnaamishka ISDALON.
ISDALON/IMQIQ waa barnaamish ku bixi doono qoraal, iyo maqal iyo muuqaal waxana loogu talogalay isu soo dhaweynta iyo mideynta muwaadiniinta qurba-joogga ah iyo kuwa qaran-joogga ah ee JSl. Inkastoo dadka qaar ay ka aaminsan yihiin qurba-joogga fikrad taban si la mid ah sidii aan aaminsanaan jiray ka hor intii aanan dhex-galin arrimaha qurba-joogga, hadana cilmi-baadhis qoto dheer, waxbarasho jaamacadeed oo khuseysa qurba-joogga oo aan ka helay TNU (The Network University) iyo waayo arragnimo aan ka qaatay shaqada aan hayo waxaan ogaaday laba arimood oo aan is qabaneyn, taas oo ah doorka waxtarka leh ee qurba-jooggu u leeyihiin dalkooda JSl iyo aqoonsi la’aanta arrintaas ee muwaadiniinta qaran-joogga ah.
Waxa baryahan aad u muuuqata in soo noqoshada iyo maalgashiga muwaadiniinta qurba-joogga ah kor u sii kacayso sanadba sanadka ka dambeeya, halka dareenka bulshada qaran-joogga ah ee ah in waddankii uu qurba-jooggu ka qaadayo uu isaguna sii xoogeysanayo. Sidaa aawadeed waxa jirta baahi waddanku u qabo in la mideeyo labadaa bulsho ee muhiimka u ah horumarka waddanka iyadoo la adeegsanayo wacyi-galin. Taasina waa sababta uu barnaamishkani u dhashay.
Barnaamishkanni waxa uu ka koobnaan doonaa 7 qaybood oo kala ah:-
Waa’ayo qurba-jooggu? Qaybtan waxa loogu talagalay in lagu xasuusiyo bulshada qaran-joogga ah asalka qofka qurba–joogga ah.
Taariikhda qurba-joogga Somaliland
Ahmiyada qurbajoogga (Why diaspora is important)
Caqabaddaha guud ee Qurba-jooggu kala Kulmaan Dalka JSl. Caqabaddaha qurba-joogga waxaan u qaybin doonaa laba laamood oo waaweyn oo kala ah caqabaddaha guud ee ay wadaagaan dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada qurba-joogga ah iyo ta labaad oo ah caqabaddaha goonida u ah qaybo ka mid ah bulshada qurba-joogga ah oo ay ka mid yihiin ganacsatada, dhalinyarada iyo dumarka. Qaybtan waxaan ku baadhi doonaa caqabadaha qurba-jooggu kala kulmaan dhinacyada bulshada (is dhex-galka bulshada, caafimaadka, waxbarashada iwm), ganacsiga iy addeega dawliga ah.
Caqabadaha ganacsatada qurba-joogga ah. Qaybtan waxaan ku lafa-guri doonaa caqabaddaha ganacsatada qurba-joogga ah ka haysta ganacsiga iyo maalgashiga.
Caqabadaha dhalinyarada qurba-joogga ah. Qaybtan iyadna waxaan ku eegi doonaa caqabaddaha dhalinyarada ka haysta dhexgalka bulshada, waxbarashada, iyo nolosha cusub ee ay kala kulmeen waddankan markey yimaadeen guud ahaanba.
Caqabadaha dumarka qurba-joogga ah. Dumarka qurba-joogga ah laftoodu waxay kala kulmaan waddankan caqabaddo ay kala siman yihiin dumarka qaran-joogga ah iyo kuwo ay kaga duwan yiinba. Sidaa darteed halkan waxaan ku gorfeyn doonaa caqabadaha u gaarka ah dumarka qurba-joogga ah.
Barnaamishka ISDALON/IMQIQ waxa uu leeyahay ahmiyad aad u wayn(significance). Iyadoo la isticmaalayo wacyi-galin, barnaamishka ISDALON waxa uu aasi doonaa dooxa u dhaxeeya labada bulsho ee qaran-joogga iyo qurba-joogga ah si ay ugu sahlanaato inay si wada-jir ah waddankooda u dhisaan. Barnaamishku waxa arrintan u mari doonaa laba waddo. Mida koowaad barnaamishkanni waxa uu badali doonaa fikirka qaldan ee ay ka qabaan bulshada qaran-joogga ahi kuwa qurba-joogga ah. Waxa uu xasuusin doonaa cida ay qurba-jooggu asal ahaan yihiin waxana uu bari doonaa qaran-joogga muhiimadda ay waddanka u leeyihiin qurba-jooggu. Mida labaad, waxa uu qurba-joogga bari doonaa hab-dhaqan ku haboon inay kula dhaqmaan dadka qurba-joogga ah. Hadafka ugu waynina ee barnaamishka ISDALON waa mideynta labada bulsho.
ISDALON waxa uu leeyahay ujooyin uu rabo inuu gaadho, waxaana ka mid ah:-
Ujeedada ugu weyn:- Isu soo dhaweynta Muwaadiniinta Qurba-joogga iyo Qaran-joogga ah
In labaadho lana soo bandhigo caqabadaha, bulsho, dhaqaale, siyaasaddeed iyo caafimaad ee qurba-jooggu kala kulmaan dalkooda JSl.
In la is fahamsiiyo labada bulsho. In loo soo bandhigo labada bulsho ee qurba-joogga iyo qaran-joogga ah qaab dhaqan oo ku haboon in midba midka kale kula dhaqmo.
In la soo bandhigo ahmiyada dadka qurba-joogga ahi u leeyihiin horumarka dalkooda JSl.
ISDALON/IMQIQ waxa uu talooyin wax ku ool ah u soo jeedin doonaa sadex dhinac:-
Dadka qurba-joogga ah
Dabaqada hogaanka dalka (elites)
Barnaamishka waxaa loo mari doonaa samaytiisa iyo soo bandhigisiisa laba waddo oo kala ah
Urrurinta afkaarta iyo figraddaha dadka barnaamishkani ay tahay inuu xog ka helo. Barnaamishkani waxa uu waydiin doonaa waraysi gooni-gooni ah, iyo doodo kooxo ah,
Ta labaad, iyadoo xogta laga helo dadkaasi ay tahay waxa laga duulayo, waxa uu tabiyaha barnaamishku samyn doonaa falanqeyn (analysis), isaga oo soo bandhigi doona wixii uu xal u arko ee lagu daweyn karo dhibaatooyinka ay dadka uu barnaamishku la xidhiidhayo soo gudbiyaan.
La soco qaybihiisa dambe….
NDP II 2017-2021
Investment Priority Sectors
Tourism & Archeology
Culture & Etiquettes
Export Trade Procedures
Market Size & Access
Somaliland Vision 2030
Copyright © 2018 Somaliland Diaspora Agency. All Rights Reserved. Designed by BERBERA-IT CONSULTANT